Nezahina nentina namonjy toeram-pitsaboana io lehilahy io, saingy efa tsy nisy aina intsony no tonga tany. Fiara nitondra mpanao propagandy handeha hamonjy ny fahatongavan’i Andry Rajoelina tao Amparafaravola io nitera-doza io. Fanindroany izao no nahafaty olona ny propagandin’ity kandida ity taorian’ilay tany Tolagnaro izay nisian’ny loza rehefa niditra tao amin’ny toerana famoriam-bahoaka ny kamio iray, ary nirodana ny fotodrafitrasa tao miditra amin’ilay toerana, ka nahafatesana iray sy naharatrana olona dimy. Tsy fanenjehana na fanaratsiana fa toa ambinim-paty, nanomboka ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 ity kandida ity. Sao dia efa tandindon’ny ho avy sahady itony zava-miseho itony sanatria ? Etsy an-kilany, mitohy ny fampielezan-kevitra ho azy, ary mirarakopana ny fampanantenana sy fampanofinofisana, Hasiana “Parking” manara-penitra, hono, ny tokotanin’ny EPP, hisy ny fanomezana fiara afaka miakatra tendrombohitra sy mandeha amin’ny rano … Ho tanteraka ve sa famahanan-dalitra toy ny hoe hametraka metro, tramway efa amboarina any ampita ka ho avy afaka volana vitsy, orinasa goavana fanamboarana simenitra,… toy ilay nambara tamin’ny 7 novambra 2010 ?